Hery - Tsiky dia ampy | Janoary 2022 |
2022-01-07 @ 18:28 in Eritreritra mandalo
Izaho dia resy lahatra sy mankasitraka ny vaksiny raha toa mbola maimaim-poana foana izy. Satria matoky ireo olona izay miezaka mafy mitady vahaolana ho an'ny hafa, ny mpikaroka, ny mpitsabo sy ireo mpanampy azy. Koa nanao vaksiny daozy fahatelo aho androany ary raha mbola ilaina koa ny daozy manaraka dia mbola vonona hatrany.
Avy niasa dia nandalo centre vaccinal. Tsy dia be olona teo ivelany, dia nanandrana niditra.
Tonga teo am-baravarana:
- Amin'ny firy ny rendez-vous-nao?
- Tena tsy manana rendez-vous aho fa sendra nandalo dia nahita hoe vitsy olona dia nijery sao dia afaka miditra.
Olona telo no teo alohako teo ivelany (couple iray sy tanora iray)
- Manam-bintana ianao fa raha nisy olona maromaro eto ivelany eto dia tsy noraisiko ianao satria tsisy rendez-vous. Mandrosoa.
Tonga tao amin'ny fandraisana anarana nanoloana an'ilay rangaha iray miaraka amin'ny taratasy misy lisitra lava be.
- Ny anaranao hoe azafady? Ny Carte d'identité-nao?
- Tsy manana rendez-vous aho ka.
- Hay, omeo ahy ny mombamomba anao dia mandehana mipetraka etsy amin'ny seza fiandrasana etsy.
Mbola teo koa izy roa kely teo alohako fa ilay tanora efa niditra any.
Misy boxes folo hitako tao anatin'ilay centre kely. Samy efa misy olona daholo, eo ivelan'ny box tsirairay misy seza iray, dia samy misy olona daholo koa. Dia izay vao miditra izany miandry ety amin'ny efitra fiandrasana. Hitako niditra tsikelikely koa ny olona avy ao ivelany.
Tsy ampy 3 minitra dia niara-nivoaka ny olona vitsivitsy tao anaty boxes vitsivitsy, dia niara-niditra ny olona niandry teo amin'ny seza fiandry. Nasaina namonjy ny seza teo amin'ny box faha-5 aho.
Tsy ampy 10 minitra akory dia tonga ny anjarako. Toa ny mahazatra, dia dokotera iray sy mpanampy azy no tao. Mahagaga fa tsara fanahy be foana ny dokotera mpanao vakisiny. Tsy nanadihady be intsony toa ny tamin'ny doses roa voalohany fa tonga dia niomana ny hanindrona.
- Moderna moa izany iny?
- Eny, fa tsy maninona io fa mitovy ihany. Ny olona mihoatra ny 30 taona amin'izao dia afaka atao Moderna daholo.
Nampiomana izy nony tena hanindrona... nitsaingoka kely... dia vita.
- Tsy nisy olana ianao tamin'ny tsindrona roa voalohany?
-Tsy nisy, hoy aho.
- Afaka tonga dia mody izany fa tsy voatery miandry 15 minitra intsony.
Navesabesatra ny tanana tonga taty an-trano fa tsy mbola naninona. Afaka 24 ora mantsy vao tena heno ny vaikany... soa ihany fa asabotsy rahampitso.
(Manaova vakisiny fa mahafinaritra any )
(Sary: Diverse Stock Photos)